Radio Asal 88.6 MHz – Jowhar _ Soomaaliya » Albashiir Oo Ka Soo Muuqday Fagaare ka Hor Baaritaankisa.
Albashiir Oo Ka Soo Muuqday Fagaare ka Hor Baaritaankisa.
Jun 17, 2019 - jawaab
Madaxweynahii Hore ee Dalka Sudan Cumar Xasan Axmed Al-bashiir ayaa ka soo muuqday Goob Fagaara ah markii ugu horeysay tan iyo Axadii xiligaasi oo ay kooxaha qaabilsan dambi baarista ay u kaxeysteen xafiiskooda ku yaal magaalada khartoum si ay baaritaano ugu sameeyaan kiisaska loo heysto ee uu geystay intii hayay talada dalka sudan.
Qodabada sida gaarka ah loogu Eedeyay Albashiir ee uu ku xad gudbay ayaa la sheegay in ay ka yihiin Qodobka 5shanaad iyo Qodobka 9 sagaalad oo uu ku xadgudbay waxaase dambibaariyaasha ay sheegeen in ay jirtay tuhumo la xiriira in albashiir uu sidoo kale ku xadgudbay qodobka 6 lexaad balse aanay jirin ilaa iminka cadeymo ay heleen sidaasi ay ku suurta gashay in albashiir uu helo fursado uu ku hadlo misane uu dadka kula kulmo.
Sabtidii ayaa Dambi-baarista waxa ay sheegen in albashiir uu wajahayo dambiyo ay ka mid yihiin Musuqmaasuq uu ku kacay intii uu xilka hogaanka suudaan uu haayay.
shirjaraaid oo uu magaalada khartoum ku qabtay madaxa hogaanka dami-baarista Alwaliid Sayed Axmed ayaa waxa uu ka sheegay in dhawaan la furayo kiisas ku xeendhaaban 41 sarkaal oo ka mid ahaa maamulkii albashiir kuwaasi oo iyagana wajahay Eedeymo musuq ah.
Hogaamiyahii hore ee sudan Cumar Xasan Axmed Albashiir ayaa awooda dalka sudan kula wareegay Afgambi sanadkii 1989kii waxaase 11kii bishii april ee sanadkani gacanta ku dhigay ciidamada milateriga suudaan kaasi oo intii aanay hareynin ciidamada ay wadanka ka dhaceen dibadbaxyo looga soo horjeeday maamulkii Albashiir.